admin2– Page 271 – Cele Top Stars
ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက နှင့်အတူ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်သွေးလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက နှင့်အတူ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်သွေးလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း မင်းသားချောလေးဒေါင်း ကတော့ အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ မင်းသားချောလေးတွေထဲမှာတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနေအေးပြီး ယောကျာ်းပီသတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ အချစ် ပိုရတဲ့ …
ပြည်သူချစ် ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဘင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် တို့ကတော့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် အနုပညာလောကထဲမှာ ကျင်လည်ခဲ့ပြီး ဖူးစာဆုံခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်နဲ့ ကိုဘင်း တို့က အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေသလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်း ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တာကြောင့် အခုဆိုရင် အဆင်ပြေတာ ထက်ကျော်လွန်တဲ့ …
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသံပါဝါအားကောင်းလွန်းတဲ့ နာမည်ကျော် အဆိုတော်ကြီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Rဇာနည်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ Rဇာနည်ရဲ့ ထွက်ရှိသမျှ သီချင်းတိုင်း ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်နေလျက်ရှိပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် ချောမောလှပလွန်းတဲ့ ဇနီးချောလေးနဲ့ သားနှစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်တို့နဲ့ အတူ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို …
နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌနေရာကို ဆက်ခံဖို့ သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အပေါ် ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ထွန်းကိုကို ဆိုတဲ့ သတင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် လက်ရှိမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် လော ကမှာ နာမည်ကြီးနေရုံသာမက ပရဟိတအလုပ်တွေကိုပါ စွမ်းစွမ်းတမံကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့ထွန်းကိုကိုကတော့ နာရေးကူညီမှုအသင်းကိုဆက်ခံမယ့်သူလို့ သတင်းထွက်နေတဲ့အပေါ် အခုလိုပဲ တုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း …
အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံပေးပြီး သူမကိုချဉ်းကပ်ခဲ့တဲ့လူလိမ်အမျိုးသမီးတဦးအကြောင်းကို ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ဟိန်းဝေယံရဲ့ညီမလေး စွဲညို့ရှင်… (နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးနော်…သတိထားကြပါ)
အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံပေးပြီး သူမကိုချဉ်းကပ်ခဲ့တဲ့ လူလိမ်အမျိုးသမီးတဦးအကြောင်းကို ပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့ ဟိန်းဝေယံရဲ့ညီမလေး စွဲညို့ရှင်… (နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးနော်…သတိထားကြပါ) သရုပ်ဆောင်မင်းသားချောလေး ဟိန်းဝေယံရဲ့ ညီမလေးဖြစ်တဲ့ စွဲညှို့ရှင်ကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းထက်မှာ လျှောက်လှမ်းနေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ စွဲညှို့ရှင်ဟာဆိုရင် အစ်ကိုဖြစ်သူဟိန်းဝေယံနဲ့ အတူ ဇာတ်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးခဲ့သေးတာ …
Cb မှာ ချစ်တယ် သနားတယ် လက်ထပ်ချင်တယ် လာ‌ပြောတဲ့သူတွေ ကို တုန့်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ
တခုလပ်ဖြစ်သွားတဲ့ သူမကို ချစ်တယ်၊ လက်ထပ်ချင်တယ်ပြောနေမယ့်အစား နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ငါးပါးသီလမငြိဘဲ အကျိုးရှိမယ့်အရာကိုသာ လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့မယ်လိုဒီီ သရုပ်ဆောင် မယ်လိုဒီကတော့ အနု ပညာမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့သလောက် သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ နှစ်ဦးသား သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာကြောင့် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပဲ …
မင်းသမီးလေး မပွတ်ကျွတ် လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ရတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်ကလည်း Suzuki Showroom မှာသွားပြီး Live လွှင့်ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ကိုဗစ်ကာလမှာ အနုပညာရှင်တော်တော်များများဟာ အနုပညာကြေးယူပြီး Live လွှင့်ဈေးရောင်းပေးတာတွေ အတော်လေး ခေတ်စားနေခဲ့ပါတယ် ။ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ Live ဟာ အတော်လေး ပရိသတ်တွေကြားမှာ အောင်မြင်ရေပန်းစားခဲ့ပြီး တခြားအနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများကလည်း Live လွှင့်ပြီး ရောင်းချတာတွေ …
Tattoo ထိုးကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ထူးခြားကိုယုံပြီးပုံအပ်လိုက်ခါမှ…. K ညီတစ်ယောက်
Zawgyi မင်းသားချောလေးမြင့်မြတ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ကာ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေတဲ့ မြင့်မြတ် ကတော့ အကယ်ဒမီဆုကိုလည်း သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို …
အရမ်းလိုချင်တဲ့ ဖုန်းလေးရလို့ ပျော်တဲ့ မင်းသမီးလေး ဝါဆိုမိုးဦး
သူမအရမ်း လိုချင်နေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဖုန်းလေးကိုရရှိခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုရိသတွေအသည်းစွဲ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်.. ပရိသတ်ကြီးရေ….ကလေးသရုပ်ဆောင်ဘဝတည်းက အနုပညာလောကထဲစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးလက်ခံတဲ့မင်းသမီးချောလေး ဝါဆိုမိုးဦးကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ ကျစ်လျစ် လှပပြီး ပြည့်တင်းလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေသာမကမိန်းကလေးချင်းပါကြွေရတဲ့မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုမိုးဦးဟာ အနုပညာ …
November 14, 2020 By admin2Celebrity
တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းကြီးကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လာပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတွေတင်နေတဲ့ ဇာတ်ပို့မင်းသမီးချောလေး နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
သွေးမတော်သားမစပ်ပေမယ့် တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင် ပစ္စည်းကြီးကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လာပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတွေတင်နေတဲ့ ဇာတ်ပို့မင်းသမီးချောလေး နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်….(ကာလတန်ဖိုး ၆သိန်းဝန်းကျင်..) အခုလိုcovid ကာလမှာ အိမ်မှာပဲ Stay Home နေရတဲ့ အတွက် ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်နားထားရတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကတော့ Online ကနေတဆင့် …
Page 1 … Page 270 Page 271 Page 272 … Page 274